トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Ongorora yokutsiva kumhanya Xintai pamusoro nepachinko yaiitirwa
Noumwe nguva ari nepachinko yokumusoro kwakafanana chiitiko guru Achitaura yokutsiva Xintai, zvakanga zvaitika pamwero waiita vanenge kamwe imwe kana mwedzi mishomanana nomwedzi. Pari hapana shanduko rinokosha zviitiko kuitira kukwezva vatengi, asi kazhinji rava kakawanda zvokuti haana kuenzaniswa. Panewo o'clock imwe mitemo akarikunda, asi kufamba kuita yokutsiva Xintai, nzvimbo mamiriro uye mutengi chawo, achizosiyana nebasa mamiriro ezvinhu nepachinko. Vachitaura
nzvimbo mamiriro, ari nepachinko yokumusoro iri nepachinko yokumusoro uye pamberi yemapurisa iri Downtown nharaunda, Xintai yokutsiva yave kuitwa vhiki ose. Chikonzero cheizvi ndechokuti, zviri Downtown nzvimbo uye pamberi chiteshi, waizorera ndechokuti makwikwi yaitarisira nepachinko parlors vari dzichiitika yava nechisimba. Xintai, zvazova chinokosha chinokosha kuitira kukwezva vatengi.
pedyo nepachinko yaiitirwa ndiko, kana kutanga yakakurumbira yokutevedzera akawanda, uchava kusingadzivisiki ezvinhu mapopoma kuti zvikuru kumhanya. Kuti kudzivisa mamiriro ezvinhu, kuenda kuti vaipikisa nokusuma nhamba yakaenzana nokuwanda pakatanga munharaunda zvitoro vakapindira mashoko kubva vagadziri. Mune nepachinko yokumusoro shure kwezvinhu Downtown, nzira dzakadaro rakaitwa vhiki ose, I kumhanya yokutsiva Xintai ari zvava kuwedzera To nokukurumidza.
Zvisinei, nepachinko muchina vachava mazana ezviuru Yen pa mumwe. Kuti swap ari Xintai, nezvayo mari zvinotora. Nokukurumidza Mangotara vakasuma 10 zviyero, ichava chairema mamiriyoni Yen.
izvozvo, kuti vauye mungozi sezvo mari sezvo pasvondo, uye depreciation uye amortization, kuti zvimwe kuwedzera mari, ishanduro kuti unofanira kuva vakadzikama kupora. Nepachinko yokumusoro, akadai cheni zvitoro zvakawanda, asi handingavi kwazvo yakakura kupora, nesimba zvemari kwakakomba nepachinko parlors, mamwe nepachinko parlors ndikaisa yakawanda Xintai ari asingadi ondomoka akaporazve kubva pashure pemazuva mashoma yokutsiva kana, panewo nyaya apo kuvhiyiwa vachawira pamberi achitora purofiti.
Uyezve, nepachinko yokumusoro vagadziri, yakaomerera zvikuru riri Tokyo pedyo prefectures Wati. Kana munhu nepachinko yaiitirwa ari Downtown, ndiye mutengi iri kuerera riri rokutsanya, haufaniri kuwana kwenyu kumanikidzwa kutenga Xintai mamiriro magamuchira yakawanda yunifomu. Asiwo kune rimwe Suburban chitoro, Xintai yokutsiva ichava pamusoro hafu Downtown kuchitoro. Achitaura sei, kusiyana nepachinko yokumusoro shure kwezvinhu Downtown, uye kuti muduku chitoro kukwikwidzana munharaunda, vatengi vari regulars pakati, ndiye chikamu kuti kazhinji zhinji kufamba.
makwikwi nekuti iwe kureva kuti mumwe bato asipo, uye hakubvisi kudiwa kuzozivisa michina mitsva pamusoro kukurumidza. Uyezve, kuti vave mutengi chawo ivaiwo basa nguva dzose pakati tinowanzotsauka kutanga kushandiswa tafura kupfuura azvino anomira inowedzerawo. Sezvo izvi, asi yokutsiva kufamba Downtown uye namafuro nepachinko parlors aona chikonzero nei siyana, hamutsvaki kuti akurumidze kupora kana Bane rokutengesa kusumwa Xintai.
Xintai vachivhura muchitoro kuti yokutsiva iri, Saka waizoita kuita, kana kupora yakatarwa kuzozivisa mubhedha nyongoroka kuti aenderane kumativi kuita nekuti rokutengesa kukwira, pane kumativi chete pano kuona kuburikidza nezuva rucherechedzo .
ndiyo okutengesa rapanzvimbo kambani, zvinoita sokuti vanhu vakawanda kuti haanamati pfungwa yokusarudza resitorendi yakanaka yakadaro nemaonero, ngatitaurei zvishoma kuziva. Xintai vachivhura muchitoro kuti yokutsiva ndiko, Saka waizoita kuita, kana kupora akatarwa wekutaura nyongoroka mubhedha aenderane kumativi kuita nekuti rokutengesa kukwira, pane kumativi chete pano kuona kuburikidza nezuva rucherechedzo.
ndiyo okutengesa rapanzvimbo kambani, zvinoita sokuti vanhu vakawanda kuti haanamati pfungwa yokusarudza resitorendi yakanaka yakadaro nemaonero, ngatitaurei zvishoma kuziva.